Ra’iisul Wasaare Rooble “Waa tallaabo horay loo qaaday Doorashada Guddoomiyaha cusub ee Gaalkacyo | Allbalcad Online
Home WARARKA Ra’iisul Wasaare Rooble “Waa tallaabo horay loo qaaday Doorashada Guddoomiyaha cusub...
Ra’iisul Wasaare Rooble “Waa tallaabo horay loo qaaday Doorashada Guddoomiyaha cusub ee Gaalkacyo
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo ka qeyb galay caleema saarka guddoomiyaha cusub ee degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa tallaabo horey loo qaaday ku tilmaamay in bulshada loo dhaweeyo maamulka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa u rajeeyey Duqa cusub ee degmada Gaalkacyo Mudane Cabdiraxmaan Sheekh Xasan in Alle u fududeeyo mas’uuliyadda culus ee loo doortay. Isagoo tilmaamay in Xukuumaddu ay dhiirrigalineyso in degmooyinka dalka oo dhan ay doortaan maamulkooda.
Eng. Rooble ayaa ku dhiirigeliyey Odayaasha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka Mudug in ay sii dardargeliyaan dadaalladooda ku addan nabadda iyo dib-u-heshiisiinta beelaha walaalaha ah, una midoobaan la dagaallanka argagixisada iyo in ay isu kaashadaan sidii loo cirib tiri lahaa.
“Waa tallaabo wanaagsan oo horay loo qaaday doorashada guddoomiyaha cusub ee Gaalkacyo, Xukuumadeyduna way dhiirrigalineysaa weyna taageereysaa iyo degmooyinka dalka oo dhami doortaan maamulkooda, oo ay lana xisaabtamaan. Tani waxay tusaale u tahay daadajinta maamulka iyo in dadku iyagu doortaan cidda ay doonayaan”.
Golaha deegaanka degmada Gaalkacyo oo dhowaan la dhisay ayaa markii ugu horreysay doortay Duqa magaalada oo ku yimid rabitaanka bulshada, tanoo qeyb ka ah barnaamijka maamul daadajinta ee shacabka loogu dhaweynayo dowladnimada.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo socdaal shaqo ku marayay deegaannada Puntland iyo Galmudug muddo 11 casho ah ayaa soo gabagabeeyey, waxaa uuna uga mahadceliyey soo dhaweyntii diirranayd ee uu kala kulmay deegaannadii uu socdaalka ku marayay.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo caddaadis kala kulantay IGAD
Next articleShocks as chief’s severed head found after abduction by Shabaab